Izindaba - Yamukela bonke abathengi abahle bakhulume ngemininingwane yezixazululo kanye neMilinganiselo yePipette imibono nathi !!
Uyemukelwa bonke abathengi abahle bakhulume ngemininingwane yezixazululo kanye neMilinganiselo yePipette imibono nathi !!
Akunandaba ukuthi umthengi omusha noma umthengi osekhulile, Sikholelwa emshweni omude kakhulu nakubudlelwano obunokwethenjelwa be-IOS Certificate China Lab Variable Volume Pipette, ikhwalithi enhle kakhulu, izindleko zokuncintisana, ukulethwa okusheshayo kanye nomhlinzeki onokwethenjelwa baqinisekisiwe Ngomusa usazise imfuneko yakho yobungako ngaphansi kosayizi ngamunye isigaba ukuze sikwazi ukukwazisa kalula ngokufanele.
Ama-oda enziwe ngokwezifiso ayamukeleka. Ibhizinisi langempela ukuthola isimo sokuwina, uma kungenzeka, singathanda ukuletha ukwesekwa okwengeziwe kumakhasimende. Uyemukelwa bonke abathengi abahle ukuxhumana ngemininingwane yezixazululo nemibono nathi !!
Ukunamathela esimisweni esithi "Ikhwalithi ephezulu kakhulu, Insizakalo Egculisayo", Besilwela ukuba nguzakwethu webhizinisi oncomekayo wakho weFektri eyenza i-China Sula Ingilazi amapayipi athweswe iziqu alinganiswa, Sihlala samukela abathengi abasha nabadala basinikeza imininingwane ebalulekile neziphakamiso zokubambisana, ake sithuthukise futhi simise eceleni komunye nomunye, futhi nokuholela emphakathini wethu nakubasebenzi!
Ukwenza ifektri iChina ingilazi yokulinganisa ipayipi, Sikholelwa ukuthi ubudlelwano obuhle bebhizinisi buzoholela ezinzuzweni zombili nasekuthuthukisweni kwazo zombili izinhlangothi. Manje sesisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside futhi obuyimpumelelo namakhasimende amaningi ngokuzethemba kwabo kumasevisi wethu abekiselwe nobuqotho ekwenzeni ibhizinisi. Sijabulela nedumela eliphakeme ngokusebenza kwethu okuhle. Ukwenza kangcono kuzolindeleka njengenqubomgomo yethu yobuqotho. Ukuzinikela Nokuqina kuzohlala kunakuqala.
Ukulinganisa iPipette, Isigaba A, Graelwa no-zero phezulu
Ukubekezelelana kwamandla (± ml)
Isikhathi Iposi: Jun-09-2021